Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo taageeray Roobow, diidayna ciidanka ay DFS geysay Baydhaba – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo taageeray Roobow, diidayna ciidanka ay DFS geysay Baydhaba
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, ayaa sheegay in Mukhtaar Roobow Cali uu xaq u leeyahay inuu isu sharaxo xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed. Mursal waxa uu taas sabab uga dhigay inuu Roobow yahay muwaadin, dowladdana ay la gashay hishiis, oo uu isagoo xor waqti badan kula qaatay Muqdisho, haddana uu haysto shahaadadiisa musharaxnimada Madaxweynaha Koofur Galbeed, taas oo ay Guddiigii Doorashada Koofur Galbeed ee iscasilay siiyeen.
Mursal, oo la hadlayey VOA-da, ayaa sheegay ineysan sax ahayn iney dowladdu isku daydo iney Roobow ka hor istaagto inuu u tartamo xilka (Madaxweynaha) ugu sareeya Koofur Galbeed, isagoo mar hore qaatay shahaadadii siineysay xaqa musharaxnimo. “Waxba kama jiraan waaye” buu yiri “in xilligaan kadib ay suuragal tahay in la hor istaago musharrax shahaado haysta, mana ahan mid munaasib ah”.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, waxa uu wareysigaas uu siiyey VOA-da ku xusay walaac ka dhashay ciidan la sheegay iney DFS geysay maanta Baydhaba. “Baydhabo uma baahneyn ciidan hor leh oo la geeyo” ayuu yiri Mursal. Waxa uu sheegay in ay magaaladaas horay u joogeen ciidan ku filan.
Isagoo ka jawaabaya in ay arrintaas keeneyso ku difaacidda Baydhaba musharax la sheegay iney DFS wadato ayuu yiri “waxaba kalama socdo arrintaas, laakiin marnaba ma taageerayo in dalka fawdo la geliyo, ciddii qalad ku kordhisana iyadaa lagula xisaabtamaa”.
DFS ayaa la sheegay iney ciidamo booliis ah geysay magaalada Baydhaba maanta, waxaase arrintaas waqti hore dhaliilay, kana soo horjeestay Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka, oo ay deegaan-doorashadoodu tahay Koofur Galbeed. Isla sidaas oo kale ayaa qaar ka mid ah Xildhibaannada Maamulka Koofur Galbeed uga hor yimaadeen arrintaas, waxaana ay sheegeen in ay ciidankaas carqalad ku yihiin Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed, oo dhici doonta 5-ta December, 2018.
Xildhibaana ka walaacsan ciidan la sheegay in ay DFS geysay Baydhaba
Wasiirro ka tirsan Koofur Galbeed oo difaacay ciidanka la geeyey Baydhaba